हामीलाई किन निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) चाहिन्छ?
जे होस् वृद्धत्व अपरिहार्य छ, त्यहाँ प्रक्रिया उल्टो हुने सम्भावनाहरू छन्, धन्यबाद निकोटिनमाइड Mononucleotide (NMN)। पाकेको बुढेसकालमा बाँच्नु सबैको सपना हो र एनएमएन जस्ता यौगिकहरू छन् जसले हामीलाई सपना प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
मलाई थाहा छ तपाईं सायद यो सोचिरहनु भएको छ कि यो कम्पाउन्ड कसरी बुढेसकालसँग सम्बन्धित छ। ठिक छ, आफ्नो बन्दुक समात्नुहोस् किनकि म तपाईंलाई निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड फाइदाहरूबाट लिन्छु।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) एक NAD + अग्रदूत हो। NAD + मानव कोशिकामा महत्वपूर्ण बायोमार्कर हो। जब हामी वर्षौंदेखि जान्छौं, यो रासायनिक गिरावट आउँछन् धेरै ईन्जाइमेटिक कार्यहरूको परिणामको रूपमा। अझ बढी, खपतको दर सधैं परोक्ष रूपमा उत्पादनको डिग्रीमा आनुपातिक हुन्छ।
ध्यान दिनुहोस् एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि, प्राय जसो बुढेसकालको उपचारले तपाईंलाई असह्य लक्षणहरूको साथ छोड्छ, NMN साइड इफेक्टहरू शून्य पछि छन्। मलाई केही प्रकाश बसाउन अनुमति दिनुहोस् कसरी एनएमएनले तपाईंको जीवनकालमा प्रभाव पार्छ।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) के हो
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (एनएमएन) पाउडर (1094-61-7) नियासिनबाट लिइएको हो। यो निकोटीनामाइड राइबोज र फास्फेट समूह बीचको प्रतिक्रियाबाटको उत्पादन हो। कम्पाउन्डले एनएडी + (निकोटिनमाइड एडेनिन डाइनोक्लियोटाइड) को बायोसिन्थेसिसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जुन सेलुलर बायोकेमिकल कार्यहरूमा एकदम मौलिक छ।
एनएडी + को संश्लेषणमा, निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड बल्क पाउडरले निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड एडेनिलइलिट्रान्सफेरेजको लागि सब्सट्रेटको रूपमा काम गर्दछ, जुन एनजाइम हो NAD + मा रूपान्तरण गर्नको लागि।
NMN मानव शरीर भित्र सेलुलर उर्जा को प्रमुख स्रोतहरु मध्ये एक हो। किनकि यो एनएडी + को पूर्ववर्ती हो, एक यौगिकमा भएको गिरावटले अर्कोलाई ठूलो असर पार्नेछ।
भर्खरको पूर्वानुमान अध्ययनहरुमा निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडले उपचारात्मक डोमेन भित्र रहेको सार निश्चय गरेको छ। एउटा उल्लेखनीय सफलता भनेको संवेदनालाई उल्टाउन र बुढेसकालको प्रक्रियालाई पक्रिराख्नमा कम्पाउन्डको विशाल भूमिकाको अनुभूति थियो।
भर्खरै, निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड क्यान्सर व्यवस्थापनको बारेमा आशाजनक अनुसन्धान भइरहेको छ।
के फूड्स मा निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) हुन्छ
भिसापावरसँग NMN र NR पाउडरको ठूलो स्तरको उत्पादन क्षमता छ,
मासिक उत्पादन क्षमता २,००० केजी।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) का फाइदाहरू के हुन्?
तपाईं मसँग सहमत हुनुहुनेछ कि बुढ्यौली र खैरो कपाल बुद्धिको पर्यायवाची छन्। यद्यपि यो म्याक्सिमको आनन्द अल्पकालिन हुन्छ जब तपाईले वरिष्ठ क्षणहरू सुरू गर्नु हुन्छ। जब हामी वर्षौं अगाडि बढ्छौं, हाम्रो शरीर रोगहरूको चुम्बकमा रूपान्तरण हुन्छ।
बुढ्यौली सेलुलर प्रकार्यहरूमा ठूलो प्रभाव छोड्दछ। उदाहरण को लागी, NAD + र निकोटीनामाइड Mononucleotide को स्तर सुनौलो वर्षको बखत पछाडि गिर्दछ। यद्यपि शरीरले अझै रसायनिक संश्लेषण गर्दछ, खपतको दर अधिकतम पुन: निर्माणको आवृत्तिलाई पार गर्दछ।
डीएनए बिग्रेको अवस्थामा NAD + ले PARP1 सक्रिय गर्दछ, DNA मर्मत गर्ने प्रोटीन, प्रभावित Organelles लाई पुनर्स्थापित गर्न।
NMN मा भएको कमीले NAD + स्तरलाई असर गर्छ र पछि mitochondria ले उर्जा उत्पादनमा कमी ल्याउँछ।
हभार्ड विश्वविद्यालयका आनुवंशिक विज्ञ डा। सिन्क्लेयरले गरेको अनुसन्धानले निकै बुढेसकाललाई कम गर्नमा निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड पूरकको दक्षता पुष्टि गर्दछ। विद्वान स्वीकार गर्दछन् कि ऊ र उसको बुवाले पूरक लिइरहेका छन् र यसले निश्चित स्मृतिमा सुधार ल्याउँछ र उनीहरूको दिमाग तिखार्छ।
मधुमेह II को उपचार
निकोटीनामाइड एडेनिन डाइनक्लियोटाइडको स्तरमा आएको गिरावटले टाइप २ मधुमेहलाई निम्त्याउन सक्छ।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडको व्यवस्थापनले मधुमेह भएका बिरामीहरूमा ग्लूकोज असहिष्णुता र इन्सुलिन संवेदनशीलतामा उल्लेखनीय सुधार गर्दछ। यसका साथै, केही आनुवंशिक विज्ञहरूले अनुमान गरे कि उपचारले जीनको अभिव्यक्तिलाई उल्टाउँदछ जुन उच्च फ्याट डाईटको कारणले हुन्छ।
जब निकोटीनामाइड एडेनिन डाइनोक्लियोटाइडको स्तर घट्छ, मानसिक स्थिति खतरामा पर्दछ।
NMN को प्रबन्धन गर्दा परिमाण अनुकूलन हुन्छ NAD +, यसैले मस्तिष्कलाई क्षतिबाट जोगाउँदै। संक्षेपमा, निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडले न्यूरोनल फंक्शन्स र अनुभूतिलाई लाभ पुर्‍याउँछ, साथै, सिक्ने, र मेमोरी।
यस कारणले गर्दा, उपचार अल्जाइमर रोग, पार्किन्सन सिन्ड्रोम, डिमेन्शियाको प्रबन्ध गर्न प्रयोग गरिन्छ।
माथिको कुरा निश्चित अध्ययन हो निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड लाभ यो पुष्टि गरेर कि पूरक कुशलताका साथ इंट्रासेरेब्रल क्षतिसँग डिल गर्दछ। जब अन्वेषकहरूले पुरानो चूहोंमा डोज प्रदान गरे, विषयहरूले इंट्रासेरेब्रल एनएडी + को उत्पादनमा व्यापक सुधार दर्ता गरे। नतिजाको रूपमा, इस्केमिक स्ट्रोक र न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लेमेन्टमा पछिल्लो कमी आएको थियो।
शरीरमा इष्टतम एनएमएन स्तर एनएडी + मा वृद्धिलाई अनुवाद गर्दछ, जसले ऊर्जा चयापचय कार्यहरू, डीएनए मर्मत, र तनाव प्रतिक्रियालाई नियमित गर्दछ। पछि निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटेडाइड सीधा मेटाबोलिजमलाई असर गर्दछ, यसको कमीले मोटापा, मधुमेह, फ्याट लिभर, र डिस्लीपीडेमिया जस्ता धेरै चयापचयको अवस्थालाई ट्रिगर गर्दछ।
ग्लुकोज असहिष्णुता को मामला मा, NMN चिनी को चयापचय बढाउन को लागी कदम चाल्छ।
अनुसन्धानले पुष्टि गर्दछ कि यदि तपाई NMN लिनुहुन्छ भने तपाईको १०% बॉडीवेट गुमाउन सक्नुहुन्छ। डा। सिन्क्लेयरले भनेझैं मानिसका लागि एकल एनएमएन डोजको प्रभाव ट्रेडमिलमा चल्नु बराबर हो।
धेरै अप मेकअप किटहरू र अनुहारको शल्यक्रियाको बारे बिर्सनुहोस् जुन तपाईंलाई अपभ्रमण योग्य अपशॉट्सको साथ छोड्छ।
वैज्ञानिकहरूले भनेझैं हामी आफ्नो धमनीहरू जत्तिकै बूढो छौं। यस टिप्पणीको साथ, तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ कि रक्तवाहिक शोष र हाम्रो रक्त वाहिकाहरूको संवेदनशीलतालाई उल्टाउँदा हाम्रो जीवनमा चाल खेल्नेछ।
के मुख्यतया युवावस्था लाई बुढ्यौलीबाट अलग गर्दछ त्यो जीवनशैली र मांसपेशिको सहनशीलता हो। यद्यपि यी सबै सुविधाहरू नियमित व्यायामको साथ सुधार हुन्छन्, सेन्ससेन्सले गडबडीलाई परिभाषित गर्दछ र मांसपेशीय ऊतकहरू कमजोर हुन्छन् जबकि यी प्रणालीहरूमा रगत प्रवाह घट्छ।
मलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्न अनुमति दिनुहोस्। जब मानव एन्डोथेलियल सेलहरू Sirtuin1 प्रोटीनमा गिरावट भोग्छन्, रगत प्रवाह एकदमै खस्नेछ। तपाईंले NMN SIRT1 को प्रमुख नियामक हो कि बुझ्नु पर्छ। तसर्थ, यो पूरक प्रशासित गर्दा sirtuin- संकेत सक्रिय हुनेछ, जसले मांसपेशिहरु र अन्य महत्वपूर्ण अंगहरु लाई अक्सिजन र पौष्टिक आपूर्ति गर्न नयाँ केशिका उत्पन्न गर्दछ।
त्यसो भए, निकोोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाम राइबोसाइडको बारेमा के हुन्छ?
खैर, दुबै एनएडी + का अग्रदूतहरू हुन्।
तिनीहरूको रासायनिक संरचनाहरूको माध्यमबाट एक झलकले तपाईंलाई भन्दछ कि NMN NR भन्दा ठूलो आणविक आकार छ। यसैले, निकोटीनामाइड राइबोसाइड मानव शरीरको माध्यमबाट यसको सम्पूर्ण अणु तोड्ने आवश्यकता बिना नै बनाउन सक्दछ।
जहाँसम्म, त्यहाँ आशाको झलक छ जब एक पछिल्लो अध्ययनले पुष्टि गर्दछ कि त्यहाँ एक रहस्यमय ट्रान्सपोर्टर छ जसले रासायनिक पाचन प्रक्रियामा पार गर्न अनुमति दिन्छ। केही वैज्ञानिकहरूले Scl12a8 प्रोटीन पत्ता नलगाएसम्म यस अध्ययनलाई यस अध्ययनबाट हटाइयो जसले NMN लाई निकोटीनामाइड एडेनिन डायनुक्लियोटाइडमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍यायो।
धेरै प्रयोगकर्ताहरूले निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड मूल्य यसको राइबोसाइड समकक्षको भन्दा थोरै बढी हुन पाउछन्।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) अनुसन्धान
यद्यपि त्यहाँ धेरै अनुसन्धान अध्ययन र गहन छन् NMN पूरक समीक्षा १ 1963 inXNUMX मा यसको खोज पछि, कृपया मलाई उल्लेखनीय परियोजनाहरुमा छुनुहोस्।
एनएमएन युवावस्थाको समर्थन
२०१ 2013 पछि, डा। सिनक्लेयर यस अध्ययनमा सक्रिय रूपमा संलग्न थिए निकोटिनमाइड मोनोन्युलेटेडाइड पूरक र एक उमेर विरोधी पूरकको रूपमा यसको भूमिका। आफ्नो अनुसन्धान पत्रमा, आनुवंशिक विज्ञले उपचारले चूहों मोडेलहरूको मांसपेशी क्षमता र मेटाबोलिज्म सुधार गरेको टिप्पणी गरे। डा। सिन्क्लेयरले NMN को दक्षतालाई बाहिर काम गर्न तुलना गरे।
अनुसन्धानको माध्यमबाट, यस हार्वर्ड आनुवंशिक विज्ञले NMN पूरक साइड इफेक्ट रेकर्ड गरेन।
NMN को कार्डियो-सुरक्षात्मक भूमिका
२०१ 2014 NMN पूरक अनुसन्धानमा, यामामोटो र तिनका साथीहरूले NMN मा कार्डियो-प्रोटेक्टिव गुणहरू छन् भनेर निर्धारण गरे। पूरकको प्रबन्धनले मुटुलाई अपप्र्यूजन र इस्केमिक चोटबाट बचाउँछ।
दुई वर्ष पछि, डी पिक्किओटो र उनका साथी आनुवंशिकी विज्ञहरूले NMN संवहनी कार्यक्षमता प्रमोट गर्न सक्छ भन्ने फेला पारे।
NMN Combats न्युरोडोजेनरेसन
२०१ 2015 मा, लांग र उनका टोलीले टिप्पणी गरे कि NMN पूरकले अल्जाइमरको उपचार गर्न सक्छ र यसको नकारात्मक लक्षणहरूलाई कम गर्न सक्छ। एक बर्ष पछि, वाang र उनको वैज्ञानिकहरुको टोली निष्कर्षमा पुगे कि उपचार संज्ञानात्मक विकार र तंत्रिका कमजोरी प्रतिरोध गर्दछ।
त्यसपछिका वर्षहरूमा, एनएमएन पूरक अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूले संज्ञानात्मक कार्यहरू सुधार गर्न निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडको प्रभावकारिताको समर्थन गर्न आएका छन्।
NMN शारीरिक र ईम्यूनोलोजिकल कार्यहरू लाई बढावा दिन्छ
२०१ 2013 मा, मिलहरू र उनको टोलीले निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) ले टाइप २ मधुमेह व्यवस्थापन गर्न सक्ने पत्ता लगाए। तीन बर्ष पछि उनले स्थापना गरे कि पूरक चूहोंमा शारीरिक र इम्यूनोलोजिकल गिरावटको पूरक हो। सोही वर्षमा, मिलहरूले योशिनो र इमाइसँग मिलेर अध्ययन गरे कि कसरी एनएमएनले संवहनीलाई असर गर्छ र अक्सिडेटिभ तनावमा यसको भूमिका।
इमाइ र जैव रसायनशास्त्रज्ञहरूको टोलीले Slc12a8 पत्ता लगाए, जो निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड शरीरमा आत्मसात गर्न सहयोग गर्दछ। प्रक्रिया छिटो छ र यसले कमसेकम NMN जैव उपलब्धतामा असर गर्छ।
२०१ 2017 देखि, केयो (टोकियो) र वाशिंगटन विश्वविद्यालयका विद्वानहरू पुरानो तर स्वस्थ विषयहरूमा NMN को क्लिनिकल परीक्षणमा सक्रियताका साथ संलग्न छन्।
यी मानव परीक्षणहरूको उद्देश्य भनेको निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडको सुरक्षा स्थापना गर्नु हो र पूरकले कसरी बीटा सेल कार्यहरू असर गर्छ भन्ने बुझ्दछ। यसबाहेक, अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूले त्यहाँ कुनै छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन चाहेको छ NMN पूरक साइड इफेक्ट.
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) डोज
सम्भवतः तपाईको दिमागमा प्रश्न रेसि? नै हो, "मैले कति एनएमएन लिनुपर्दछ?" ठिक छ, मलाई यो तपाईं को लागी टूट्न दिनुहोस्।
मानव को लागी एक विशिष्ट NMN खुराक दिन को बारे मा 25mg र 300mg छ। सबै उपलब्ध क्लिनिकल परीक्षणहरूमा, विषयहरूले अधिकतम २ 250० मिलीग्राम / दिन लिन्छ।
डा। सिन्क्लेयर स्वीकार गर्छन् कि उनी प्रति दिन M750०mg NMN लिन्छन्। यदि तपाइँ अनलाइन NMN पूरक समीक्षा मार्फत योजना बनाउनुहुन्छ भने, तपाइँले केही उपयोगकर्ताहरू १०००mg / दिनसम्म जान्ने महसुस गर्नुहुनेछ। यद्यपि निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड साइड इफेक्टको कुनै ज्ञात रेकर्डहरू छैनन्, तपाईंले सकेसम्म कम खुराकमा रहनु पर्छ।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) सुरक्षित छ
अहिले सम्म, निकोोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडलाई असुरक्षितको रूपमा अभियोग लगाउन कुनै डेटा छैन। क्लिनिकल परीक्षणको क्रममा प्रकाशित रेकर्डहरूबाट, कुनै पनि विषयले कुनै पनि गंभीर निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड साइड इफेक्ट दर्ता गरेको छैन। अधिक के हो भने कुनै पनि प्रतिकूल लक्षणहरू रेकर्ड नगरी नै बाह्य अध्ययनहरू सफल भए।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) पूरक
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडले एफडीएले पूर्ण समर्थन प्राप्त गरेको छैन, यो औषधि प्रिस्क्रिप्शन होईन। यद्यपि तपाइँ यसलाईaको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ आहार पूरक.
जे होस् तपाईं यसलाई स्थानीय औषधि पसलहरूमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ, उत्तम उत्पादन उत्पादनका लागि अनलाइन छ। तपाइँ निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड बल्क पाउडर तपाइँको अनुसन्धानको लागि किन्न सक्नुहुन्छ वा आहार पूरकको लागि जान सक्नुहुन्छ। जे होस्, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं कानूनी बीटा-निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड आपूर्तिकर्ताबाट किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ।
NMN जैवउपलब्धता वृद्धि गर्न, तपाईंले मौखिक ट्याब्लेटको सट्टा उप-भाषिक गोलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।
एफडीए मापदण्डका अनुसार एक व्यक्तिलाई कम्तिमा ot560०mg निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडको आवश्यक पर्दछ। तपाईंले जान्नुपर्ने कुरा के हो कि ब्रोकोली र बन्दकोबीले अन्य खाद्य पदार्थहरू र फलफूलहरूको तुलनामा NMN को अधिकतम परिमाण दर्ता गर्दछ।
उदाहरण को लागी, ब्रोकोली 0.25mg र 1.12mg बीच रसायन समावेश गर्दछ। यसैले, यदि तपाईं स्वस्थ स्थिति कायम राख्न र एफडीए आवश्यकताहरू पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले एक दिनमा १1500०० पाउण्ड ब्रोकली खपत गर्नुपर्नेछ। किनभने त्यसो गर्नु अविश्वसनीय रूपमा असम्भव छ, तपाईंले बिटा-निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड आपूर्तिकर्ताबाट पूरक खरीद गर्न विकल्प छान्नु पर्छ।
याओ, जेड, एट अल। (२०१ 2017) निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडले जेएनके एक्टिभेसनलाई अल्जाइमर रोग रिभर्स गर्न रोक्दछ.
योशिनो, जे, एट अल। (२०११) निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लिओटाइड, एक प्रमुख NAD (+) मध्यवर्ती, चूहोंमा डाइट र आयु-प्रेरित मधुमेह को पाथोफिजीलोजी उपचार गर्दछ। सेल मेटाबेलिज्म।
यामामोटो, टी। एट अल। (२०१ 2014)। निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लिओटाइड, एनएडी + संश्लेषणको एक इंटरमीडिएट, हृदयलाई ईस्केमिया र रिपफ्यूजनबाट बचाउँछ।
वाang्ग, वाई, एट अल। (२०१ 2018)। एनएडी + पूरकले परिचयको डीएनए मर्मत कमीको साथ नयाँ एडी माउस मोडलमा कुञ्जी अल्जाइमरका सुविधाहरू र डीएनए क्षति प्रतिक्रियालाई सामान्य बनाउँदछ।
केइसुके, ओ। एट अल। (२०१ 2019) मेटाबोलिक डिसअर्डरहरूमा बदलिएको एनएडी मेटाबोलिजमको प्रभावहरू। जैव चिकित्सा विज्ञान जर्नल।
१. हामीलाई किन निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) चाहिन्छ?
२.निखोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) के हो
W. कुन खानामा निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) हुन्छ
W. निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) का फाइदा के हुन्?
N.एनएमएन बनाम एनआर
N.निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) अनुसन्धान
N.निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) डोज
I.Is निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) सुरक्षित छ
9.Nicotinamide Mononucleotide (NMN) पूरक